उपकुलपतिले चासो नदिँदा बीपीको ३० करोड फ्रिज हुँदै - Koshi Online
बुधबार, चैत २८, २०७४ मा प्रकाशित
उपकुलपतिले चासो नदिँदा बीपीको ३० करोड फ्रिज हुँदै
चैत २८, सुनसरी, विवादित नै रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातृशिशु स्याहार केन्द्रको भवनका लागि विनियोजित ३० करोड बजेट फ्रिज हुने भएको छ ।भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ७४/७५ मा आएको बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुन लागेको हो ।
भवन निर्माणका लागि उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले तदारुकता नदेखाउँदा बजेट फ्रिज हुन लागेको प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद (बीपी) दासले बताए । दास उपकुलपति हुँदा निर्माण सुरु भएको एमसीएच भवनमा नेपाल सरकारले करिब ६० करोड रुपैया खर्च गरिसकेको छ । ४ सय शैयाको एमसीएच भवनका लागि यस वर्ष ३० करोड बजेट आएको थियो । पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोरा र उपकुलपति रौनियारबीच विवाद बढ्दै गएकाले भवन निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । जसका कारण बजेट पनि फ्रिज हुने निश्चित भएको छ । एक वर्षअघि उपकुलपति भएर आएका रौनियारले सदैव लाञ्छना लगाउने काम मात्र गरेको दासको गुनासो छ ।
‘ एमसीएच भवन निर्माणमा अहिले भइरहेको विवादहरुको दोस मलाई लगाउँदै रौनियार पञ्छिन खोजेका छन् ’, उनले भने, ‘ मलाई दोष देखाउनुको साटो विवाद समाधान गरेर अघि बढे समयमै एमसीएच भवन निर्माण हुन्छ ।’ दासका अनुसार दुई सय शैयासहित दुईतले भवन निर्माण गर्ने पहिलो चरणको अनुमानित लागत रहेको थियो, पछि विभागहरुसँग छलफल गर्दा भविष्यका लागि चार सय शैयासहित तीन तलाको स्वास्थ्य उपचारका लागि भवन र थप तला प्रशासनिक कार्यका लागि निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव आएपछि अनुमानित लागत बढेको हो ।उनले भने, ‘ सिनेटबाट अनुमोदन गर्नेगरी ड्रईङ डिजाईन गरेर बुझाईयो, सरकार परिवर्तनसँगै प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भएको थियो ।’
तत्काल विनियोजन भएको बजेट ३० करोड रुपैयाँबाट काम सुरु नगरेको भए फ्रिज हुने अवश्था आएकोले निर्माण कार्य थालिएको उनको भनाइ छ । दासले शर्मा रसुवा जेभी काठमाडौंलाई दुई अर्ब १८ करोडको लागत अनुमान स्वीकृत गरी दुई अर्ब १७ करोड ६० लाखमा ठेक्का स्वीकृत गरेका थिए । कूल ठेक्का रकम दुई अर्ब ४९ करोड ६४ लाख ४२ हजार चार सय ८७ मध्ये करिब ६८ करोड भुक्तानीसमेत भइसकेको थियो । लागत अनुमानमा वृद्धि भएपछि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी निवेदकको लागत कट्टा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
असार ५ गतेको आयोगको निर्णय असार १४ गते प्रतिष्ठानलाई पठाइएको थियो । तर वर्तमान उपकुलपति रौनियारले निर्माण कार्य अघि बढाउन पहल नगरेको दासको भनाइ छ । सिनेट बोलाएर समस्या समाधान गर्नुको साटो भवन निर्माण हुन नदिने खेलमा उपकुलपति रौनियार लागेको दासको आरोप छ । यसअघि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री बोहोराले रौनियारलाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस पनि गरेका थिए ।
तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २०७३ असारमा चार सय शैयाको स्त्री तथा प्रसुती र नवजात शिशु तथा बाल रोगसम्बन्धि सबैखाले उपचारका लागि भवन निर्माण सुरु भएको थियो । ४ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले चार सय शैयाको मातृ-शिशु स्याहार केन्द्रको भवन शिलान्यास गरेका थिए ।